सबैभन्दा ठूलो समस्या पारवहन नै हो - Karobar National Economic Daily
सबैभन्दा ठूलो समस्या पारवहन नै हो
query_builderJune 2, 2017 10:44 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility727
अशोक टेमानी सभापति, स्थल यातायात तथा पारवहन समिति
अशोक टेमानी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा स्थल यातायात तथा पारवहन समितिका सभापति हुन् । उनी नेपाल सरकारको सडक बोर्डमा पनि मनोनीत भएका छन् । यश इन्टरनेसनलका सञ्चालक टेमानी वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।
उनको कम्पनीले प्लास्टिक उद्योगहरूमा आवश्यक कच्चापदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने गरेको छ । नेपालको भौगोलिक विकटता र सडक पूर्वाधार समस्याका कारणले आयात–निर्यातमा सधैं उद्योगी–व्यवसायीहरूले समस्या भोग्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा सडकको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सके औद्योगिक विकासका साथै रोजगारी सिर्जना भई देशले आर्थिक विकासको गति लिने उनी बताउँछन् । नेपालमा भएका स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सके यहाँ थुप्रै सम्भावना रहेको टेमानीको दाबी छ ।
आयात–निर्यातमा व्यवसायीका समस्या, मुलुकको आर्थिक अवस्था, सम्भावना र चुनौतीलगायतका विषयमा कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले टेमानीसँग गरेको कुराकानी :
यातायात पारवहन समितिको सभापति र सडक बोर्डको सदस्य हुनुहुन्छ, नेपालको यातायात र पारवहनको अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो । यहाँको ७३ प्रतिशत भूभाग पहाडि र हिमालले ढाकेकाले सडक पूर्वाधार अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ । हाम्रो वैदेशिक व्यापार पनि बढी भएकाले पारवहनका सम्बन्धले छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि त्यत्तिकै सरोकार राख्छ जति भित्री पारवहनहरूसँग सम्बन्ध राख्छ ।
अब देशभित्रको पारवहनको कुरा गर्ने हो भने सडकभन्दा हवाई मार्ग नै बढी प्रयोग भइरहेको छ । किनभने पहिलेदेखि नै पहाडका विकट स्थानहरूमा सडक सञ्जाल नभएको अवस्था थियो । अहिले बिस्तारै विकास हुँदै गएको छ ।
नेपालका साना–साना गाउँ, बजारहरूमा सडक नपुगेको अवस्था छ । आमनागरिकले सडकबाट यात्रा गर्ने स्थिति छैन । सकी–नसकी हवाई यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । सामान पठाउँदा पनि सबै हवाईमार्गबाटै महँगो भाडा तिरेर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । मानिसको आधारभूत अवश्यकताका सामग्री नुन, तेल, चामल, दाललगायतका अन्य उपभोग्य वस्तुहरू पनि महँगो दरमा किनेर उपभोग गर्ने अवस्था छ
। तराईमा सडकको अलिकति सहजता छ, तर स्तरीय छैन । यी सबै कुराको घरेलु सडक संरचनाको निर्माणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस वर्षको बजेटमा सरकारले केही मात्रामा सडक र भौतिक संरचनालाई सम्बोधन गरेको छ । सडकको घरेलु समस्या मात्र होइन, छिमेकी देश भारतसँग पनि समस्या भोगिरहेका छौं ।
हाम्रो ठूलो व्यापार विदेशबाट हुने भएकाले कोलकाता बन्दरगाहबाट धेरै वस्तु आयात गर्दा भारतको सडक र रेलको भौतिक संरचना पनि खराब रहेकाले समस्या भएको छ । कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान ल्याउँदा सडकमा समय लाग्ने र रेलवेमा पनि खाली नहुँदा त्यसको विलम्ब शुल्क तथा ड्यामरेज चार्ज तिर्नुपर्दा सामान आयात महँगो हुने गरेको छ ।
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सडकका लागि विनियोजन गरेको रकमले सडकको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण र सुधार हुन सक्ला ?
सडकमा करिब ९५ अर्ब जति बजेट विनियोजन भएको छ । यो बजेटलाई सडकमुखी बजेट पनि भन्न सकिन्छ । कतिपय संघसंस्थाले, व्यापारीहरूले बजेटले सम्बोधन गरेन भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । तर, मेरो बुझाइमा अहिलेको बजेटले सडकको स्तरोन्नति र आधारभूत पूर्वाधार विकासका लागि राम्रो सम्बोधन गरेको छ ।
सडक निर्माणमा सरकारले दुईवटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विश्वमा सडक निर्माणका विविध प्रविधि प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेका छन् । हामीसँग भएका वेस्टेज, ब्वाइलरका खरानीजस्ता कच्चापदार्थहरू सडक निर्माण गर्दा मिसाउन सकिन्छ । उद्योगहरूबाट निस्किने फोहोर प्रयोग गरेर पनि सडक निर्माण हुन सक्छ ।
सडक निर्माणमा प्लास्टिकजन्य वस्तु, जुन उद्योगबाट वेस्टेजका रूपमा निस्किन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकियो भने लागत घट्छ र गुणस्तर पनि बढ्छ । यसका लागि सडक बोर्डमा एउटा गुणस्तरीय प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्छ । अर्को, सडक निर्माणको पनि नियमन हुनुपर्छ । हामीले एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । सडक निर्माणका लागि ठेक्का दिइसकेपछि प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ ।
यी दुईवटा कुरा भइदियो भने हाम्रो सडकको गुणस्तर राम्रो हुन्छ र सडक पनि समयमा निर्माण हुन्छन् । सडकका लागि राम्रै बजेट विनियोजन भएको छ । विकासका लागि विनियोजित पुँजीगत खर्चहरू छन् । त्यसलाई समयमा खर्च गर्न सकियो भने सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा सडकको स्तर र पूर्वाधार संरचना राम्रो छैन, तर पनि यातायातका साधन भने धेरै आयात भइरहेका छन् । यो समस्या कसरी समाधान हुन्छ ?
उदार आर्थिक व्यवस्थामा हामीले सवारी साधन आयात गर्न नदेऊ भन्न मिल्दैन । हाम्रो मनस्थिति के भयो भने हामी पैसाबाट होइन, मनले गरिब भएका हौं । हामी १० वर्षपछि के हुन्छ ? २० वर्षपछि के हुन्छ ? ५० वर्षपछि के हुन्छ ? यसबारेमा केही सोच्दैनौं । विकसित राष्ट्रहरू १ सय वर्ष, २ सय वर्षको कार्ययोजना लिएर अगाडि बढिरहेका छन् ।
सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान नै पुग्न सकेको छैन । सवारी साधनमा लिएको करले सडक बनाउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । आयात गरिएका सवारी साधनबाट ३ सय प्रतिशत भन्सार लिइन्छ भने त्यो राजस्व सडकमा खर्च हुनुपर्छ । पहाडमा सडक नै छैन । त्यहाँ युद्धस्तरमा सडक निर्माण हुनुपर्छ ।
यसको कारण के हो भने सबै कुरा काठमाडौंकेन्द्रित भएकाले यो सबै चाप काठमाडौंमै थोपरिएको छ । यसलाई हामी विकेन्द्रीकरण गर्न खोजिरहेका छौं । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा र लुम्बिनी विमानस्थल भनेको त विकेन्द्रीकृत हो नि ! सरकार त्यसलाई निर्माण गर्न चाहिरहेको छैन । सरकारको नियत नै खराब छ । किन राजनीति भइरहेको छ ? बर्दिबासदेखि काठमाडौंसम्म जापानले सडक निर्माण गरिदियो, तर सिंगल रोड बनाइदियो ।
त्यहाँ सरकारले अनुगमन गर्नुपथ्र्यो, सिंगल रोड आवश्यक छ कि डबल रोड चाहिन्छ भनेर सरकारले हेर्नुपथ्र्यो । त्यो डबल रोड भइदिएको भए वैकल्पिक सडकका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । अहिले त्यो सडकको उपयोग नै भएन । यो सब नीतिगत समस्याका कारण भएको छ । यसलाई सुधार गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । विज्ञहरूलाई राखेर विभिन्न स्तरको नीति निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालमा सामान आयात गर्ने नेपाली व्यवसायीहरूले कोलकाता बन्दरगाहमा बारम्बार समस्या भोगिरहेका छन् । यो समस्या नेपाल सरकारको कमजोरी हो कि भारत सरकारको हो ?
नेपालले सामान आयातका लागि प्रयोग गर्न पाएको कोलकाता बन्दरगाह हो । कोलकाता बन्दरगाहको क्षमता धेरै कम छ र त्यहाँ काम गर्ने अवस्था छैन भनेर त बीसौं–तीसौं वर्षदेखि थाहा छ । तर, त्यसको विकल्प छेउमा रहेको हल्दिया बन्दरगाह प्रयोग गर्न सकेनौं । यो कोलकाताभन्दा ठूलो छ । हल्दियामा भने आवश्यक पूर्वाधार संरचना छैन ।
नेपालको व्यापार बढ्दो क्रममा छ । कोलकाता बन्दरगाहले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा २०–३० वर्ष अघिदेखि नै थाहा थियो । त्यसको विकल्प सरकारले सोच्नुपर्ने हो । १५ वर्ष भइसक्यो नेपालको सुख्खा बन्दरगाह बनेको, त्यो पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । कोलकाताबाट सुख्खा बन्दरगाहसम्मै सीआईएफ दिने कुरा थियो ।
तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले पहल गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । भारत सरकारसँग कुरा गर्दा तिम्रो सरकारसँग कुरा गर भन्छ । यहाँ हाम्रो कुरा सरकारले सुन्दैन अनि समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? हामी वार्षिक ५ सय करोड जरिवाना तिर्न बाध्य छौं ।
कोलकाताको कम्पनी कंकरलाई पारवहनको एकाधिकार दिइएको छ । किन दिने एकतर्फी ? अहिलेको उदार अर्थनीतिमा सबैलाई अधिकार दिनुपर्ने हो । कंकरलाई एकाधिकार दिएकाले उसले काम गर्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि हाम्रा ७–८ सय कन्टेनर रोकिइएका छन् । १४ दिनमा आइपुग्ने सामान एक–डेढ महिनासम्म लाग्ने गरेको छ । त्यसको पैसा हामीले तिरिरहने ? व्यापारीको पैसा नेपालकै हो भन्ने सरकारले बुझ्नुपर्छ ।
यसको समाधानका उपायहरू धेरै छन् । हामीलाई समाधानका बारेमा धेरै जानकारी पनि छ । तर, सरकारले हामीलाई बोलाएर सोध्दैन, हामीले भन्यौं भने सरकारले सुन्दैन । त्यसैले गर्दा हाम्रो सबै निर्यात शून्य भएको छ । यसको सबैभन्दा ठूलो समस्या पारवहन नै हो । यो सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग पनि सुझाव लिनुप¥यो ।
वीरगन्ज नेपालको राजस्वमा योगदान दिने मुख्य नाका हो । वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट उठेको राजस्व केन्द्रमै जान्छ । २ नम्बर प्रदेशका लागि योबाहेक अन्य राजस्वका स्रोत के हुन सक्छन् ?
हेर्नुस्, आयस्रोतका लागि म दुबईको उदाहरण दिन्छु । त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा केही पनि छैन । दुबईको तातो वातावरणमा बालुवाबाहेक अरू केही छैन । ५० डिग्रीको तापक्रम हुन्छ । तर, दुनियाँका कम्पनीहरू सबै त्यहीं किन जान्छन् ?
दुवई गएन भने घुमघाम नै पूरा हुँदैन पनि भनिन्छ । एक तोला सुन निकाल्ने खानी छैन, तर १ हजार टन वार्षिक सुनको व्यापार गर्छ । त्यहाँ सुन किन्ने केन्द्र बनेको छ । दुबईमा केही नहुँदा पनि सुन किन्न जानेहरूले गर्दा यति विकास भयो भने नेपालको २ नम्बर प्रदेशमा त धेरै आयस्रोतहरू छन् । हाम्रो सोच सकारात्मक भयो भने विकासका थुप्रै सम्भावना छन् । उद्योग, व्यापार, पर्यटनबाट २ नम्बर प्रदेशमा राजस्व उठाउन सकिन्छ ।
नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा धेरै हाइड्रोपावर छन्, पर्यटन उद्योगहरू छन्, सबैथोक छ । आज हामी गरिब किन त ? जब हामीसँग यति हुँदाहुँदै पनि गरिब छांै भने २ नम्बर प्रदेशमा केही नभए पनि समस्या त्यही हो । भएको ठाउँमा पनि गरिब, नभएको ठाउँमा त झन् गरिब । त्यसैले २ नम्बर प्रदेशलाई एउटा भिजन तयार गरेर एकदम सक्षम प्रदेश बनाउन सकिन्छ र देशको ढुकढुकी हुन सक्छ । यो काठमाडौंलाई खुवाउने क्षेत्र बन्न सक्छ ।
ठूलो व्यापारको क्षमता छ । पारवहनको क्षमता छ । दक्षिण एसियाकै उद्योगहरूलाई यहाँ ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ । भारतका ठूला–ठूला उद्योगहरू स्थापना गराउन सकिन्छ । हामीसँग दक्ष–अदक्ष जनशक्तिहरू पनि छन् । २ नम्बर प्रदेशमा कृषिका उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ ।
यहाँ उत्पादित कृषिउपज दुनियाँमा पु¥याउन सकिन्छ । प्रदेशमा विकास चाहियो, राजनीति होइन । आपसमा झगडा गर्ने राजनीति भयो भने २ नम्बर प्रदेशमा केही हुन सक्दैन । तर, राजनीतिकर्मी, उद्योगी–व्यवसायी, नागरिक समाज मिलेर अगाडि बढ्यौं भने यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरै उद्योग विस्थापित भएका थिए । अहिले फेरि नयाँ उद्योग स्थापना हुने क्रम बढ्दै छ । उद्योग स्थापनाका लागि यहाँ वातावरण सहज भएको हो ?
यो मानसिकताको कुरा हो । एउटा मानसिकताले के देखाउँछ भने केही आयस्रोत छैन । अर्को, पैसा फालाफाल छ तर त्यो पैसा लिने मान्छे छैन । यो स्थिति उद्योगमा भइरहेको छ । सरकारलाई राजस्व चाहियो, तर त्यो उद्योगलाई संरक्षण गर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकता सरकारको छ ।
वीरगन्ज भनेको औद्योगिक नगरी हो । वैदेशिक लगानी, स्वदेशी लगानीलगायत देशको ७० प्रतिशत लगानी यही क्षेत्रमा छ । तर, औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदैनौं, उद्योगलाई सुविधा दिँदैनौं । उद्योगको समस्यासँग सरोकार छैन । बन्द–हड्ताल रोकिँदैन आदि–इत्यादि समस्या छन् भने राजस्व कहाँबाट आउँछ ? हामीले रोजगारी दिएनांै भने कहिलेसम्म विदेशमा रोजगारीका लागि मरिरहने ?
रोजगारी दिने सबैभन्दा ठूलो क्षेत्र भनेकै उद्योग हो । त्यो उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताहरूले हजारौं उद्योगमा लगानी गर्न खोजीरहेका छन् । जापानी, कोरियाली, भारतीय लगानीकर्ताहरू पनि लगानी गर्न खोजिरहेका छन् । उद्योग, व्यापार, राजस्वजस्ता क्षेत्रमा राजनीति हुनु हँुदैन । त्यस्ता व्यापार, उद्योग, पारवहनको विकास गर्नुपर्छ, जसले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकोस् ।
२ नम्बर प्रदेशमा अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, भ्रष्टाचारलगायतका क्षेत्रको सूचकांक निकै खराब देखिएको छ । यसको कारण के होला ?
जुन ठाउँको आर्थिक सूचक कमजोर हुन्छ, त्यहाँ भोकमरी, आपराधिक घटना, स्वास्थ्यमा समस्या, शिक्षामा कमजोरीजस्ता समस्या देखिन्छन् । अफ्रिका, अफगानिस्तानलगायतका देशलाई हेरौं, यी सबै आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण समस्यामा छन् ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि २ नम्बर प्रदेश यस्तो प्रदेश हो, जसमा आर्थिक सूचकांक नकारात्मक छ । यसलाई उकास्न पनि प्रयास भएको छैन । रोजगारी नभएको हुँदा यो स्थिति आयो । यहाँका किसानले मल, बिउ, सिँचाइलगायतका कुराको अभावका कारण खेती गर्न पाइरहेका छैनन् । आयआर्जन नभएको हुँदा नराम्रो बाटोमा लागे । त्यसले गर्दा २ नम्बर प्रदेशमा नराम्रो अवस्था आयो । यसको समाधान एउटै छ कि यहाँ यति रोजगारी सिर्जना भइदियोस, २–३ लाख रोजगारी सिर्जना भयो भने त्यहाँ पचासौं लाख रोजगारी खुल्न सक्छ ।
जस्तै, सरकारले बाटो बनाइदियो भने आफैं गाडी गुड्छ, राजस्व आफैं आउँछ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा नराम्रो कसरी भयो भने ऊसँग पैसा छैन, पौष्टिक आहार खान पाउँदैन अनि स्वास्थ्य कहाँ राम्रो हुन्छ ? रोजगारी सिर्जना गर्न सक्यौं भने यस्ता समस्या सबै हराएर जान्छन् ।
पछिल्लो समयमा भ्रष्टाचारका कारणले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त थियो । अब स्थानीय तहको कार्यान्वयन र जनप्रतिनिधिको चयनपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने सम्भावना छ ?
भ्रष्टाचार प्राकृतिक कुरा नै भइसक्यो । पैसासँग मान्छेको यति लगाव भइसकेको छ कि पैसाबिना बाँच्नै नसक्ने भएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि कठोर नीति बनाउनुपर्छ । साथै, नेतृत्व तह पनि इमानदार हुनुपर्छ । कठोर नीति लागू ग¥यो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सरकारमा बसेकाहरू आफैं इमान्दार हुनुपर्छ ।
आज भारत नेपालभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देश हो । एक जना इमानदार नेतृत्वले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको छ । यसले पनि के देखिन्छ भने इमानदार भएर नियमन गर्न सकियो भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
व्यक्तिको मुख हेरेर होइन, काम हेरेर दण्ड–जरिवाना र पुरस्कृत गर्नुपर्छ । हाम्रो सबै प्रणाली नै बिग्रिएको अवस्था छ । स्थानीय निकाय नभएको २० वर्ष भइसकेको छ । राजनीतिले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको अवस्था थियो । नागरिक समाज थिएन । नागरिक समाजले नै राम्रा–नराम्रा कुरा छुट्याउँछ ।
हामीकहाँ विकासको प्रक्रियामा पनि प्राविधिक त्रुटीहरू छन् । जस्तै, आर्थिक वर्षको बजेट जेठमा आउँछ । त्यसलाई कार्यान्वयन सुरु हुँदा वर्षायाम सुरु हुन्छ । त्यसपछि फेरि तीन महिना चाडपर्व सुरु हुन्छ अनि बाँकी ६ महिनामा ३ महिना जाडो समय हुन्छ र काममा अवरोध हुन्छ ।
विकासे खर्चको नाममा भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । यसलाई रोक्न चैतमा बजेट ल्याउने व्यस्था गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा के हुन्छ भने काम सुरु गर्दागर्दै वर्षा लागे पनि निरन्तरता रहन्छ र समयमा पूरा गर्न सकिन्छ । एक वर्षको बजेट तीन महिनामा सक्नुपर्ने भएर पनि भ्रष्टाचार बढी हुने गर्छ ।
ढुवानी र पारवहन मुख्य समस्या
नेपालको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र वीरगन्जबाट अन्य स्थानमा मालसामान ओसारपसारका लागि ढुवानी र पारवहन मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ । उद्योगमा उत्पादनका लागि आयात गरिने कच्चापदार्थ समयमा नआइपुग्ने र उद्योगबाट उत्पादित मालसामान ढुवानी गर्दा सडकको अवस्थाले गर्दा महँगो भाडा तिर्नुपरेकाले समस्या हुने गरेको छ ।
ढुवानी व्यवसायीहरूको सिन्डिकेट र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सामान ओसारपसार गर्ने कन्टेनरहरू कोलकाता बन्दरगाहमै अधिकांश समय रोकिने हुँदा समस्या हुने गरेको उद्योगी–व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् ।
भारतको रक्सोलमा आउने मालसामान भण्डारणका लागि गोदाम नहुँदा व्यवसायीहरूलाई समस्या हुने गरेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूका लागि आउने डर्टी कार्गोहरू राख्ने स्थान अभाव, त्यसपछि खुला सामान ढुवानी गर्दा रक्सोल र वीरगन्ज भन्सारमा लाग्ने सवारी जामको समस्याका कारण थप मारमा उद्योगी व्यवसायीहरू पर्ने गरेका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, व्यापार र कृषिको प्रचुर सम्भावना
नेपालकै सबैभन्दा धेरै उद्योग वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा स्थापना भएकाले यहाँ रोजगारीका साथै आर्थिक विकास पनि बढ्दै गएको छ ।
भौतिक संरचनाहरूको निर्माणले तीव्रता लिएसँगै यहाँ पर्यटन उद्योगहरूको पनि विकास हुँदै गइरहेको छ । ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरू रहेकाले यस क्षेत्रमा पर्यटन उद्योग पनि फस्टाउने सम्भावना छन् ।
कृषिको उर्वर भूमि बारा, पर्सामा रहेको र यस क्षेत्रमा व्यावसायिक माछापालनका साथै सरकारले घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले पनि कृृषि उद्योगमा थप सम्भावना बढेको छ । व्यावसायिक पशुपालनदेखि लिएर विभिन्न सहकारी, कृषि सहकारी र दुग्ध सहकारी संस्थाहरूको स्थापनाले व्यावसायिक कृषि व्यवसाय गर्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ ।
उद्योग–कलकारखानामा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा बसोबास गर्ने भएकाले कृषि उत्पादनको बजारमा खासै समस्या देखिएको छैन ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अशोक टेमानी पारवहन